Al-Shabaab oo weeraray gaadiid ay saarnaayeen mas'uuliyiin & khasaaro jira.. - Awdinle Online
Al-Shabaab oo weeraray gaadiid ay saarnaayeen mas’uuliyiin & khasaaro jira..
Wararka laga helayo gobolka Gedo ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ay sheegayaan in rag hubeysan ay weerar jidgal ah ku qaadeen Gaadiid ay wateen Guddoomiyaha Degmada Luuq Axmed Buule Iyo Taliyaha Ciidanka Booliska degmadaas Cabdullaahi Xuseen.
Mas’uuliyiintaan ayaa xilliga la weeraray waxaa ay ka baxeen degmada luuq , iyaga oo kusii jeeday Degmada Doloow, waxana la sheegay in weerarkaasi ay ku qaadeen Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaal kooban ayaa dhex-maray ilaalada mas’uuliyiinta Maamulka degmada Luuq & Xubnaha ka tirsan Al-Shabaab, waxana la sheegay in uu jiro khasaaro, balse aan weli wax faah faahin ah laga bixin.
Maamulka gobolka Gedo iyo mas’uuliyiinta la weeraray kama hadlin dhacdadaas, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in Ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo kala duwan.
Degmooyin & degaano ka tirsan gobolka gedo ayaa mararka qaar waxaa weeraro jidgal ah ka fuliya Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab, iyada oo sidoo kale Ciidamada dowladda ay fuliyaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo shir ka furay Garoowe & hal arrin oo looga hadlayo
Next articleMusharax kashifay sababta ay u shaacin wayeen liiska Xubnaha NISA ee kujira Guddiyada doorashooyinka